के PR10 वेबसाइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ?
सम्भवतः यो राम्रो हुन सजिलो लाग्छ. तथापि, यदि तपाईसँग समस्या भएको एक स्मार्ट दृष्टिकोण छ सबै कुरा वास्तविक छ. तपाईंलाई सजग हुनु आवश्यक छ कि हरेक दिन PR 10 ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न धेरै अवसरहरू छन्. तपाईलाई आवश्यक छ तपाईको आँखा र कान राख्नका लागि सधैं नयाँ लिङ्क निर्माण अवसरों को लागी खोजी जारी राख्नुहोस्. यो अतिथि ब्लगिङ भन्दा अधिक प्रभावकारी लिङ्क निर्माण प्रविधिहरू प्रयास गर्न उचित छ वा उच्च पीआर इनबाउन्ड लिङ्क प्राप्त गर्न लिङ्कहरू टिप्पणी गर्नुहोस्.
आउनुहोस् हामी PR10 ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सम्भावित तरिकाहरू छलफल गरौं. केहि वेबमास्टर्सहरूले विश्वास गर्छन् कि उच्च गुणस्तर इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने एकमात्र तरिका उत्कृष्ट सामग्री उत्पादन गर्न हो. यदि तपाईंको सामग्री उपयोगी छ भने, तपाईले जैविक गुणस्तर बाह्य लिङ्कहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ. यद्यपि, यो वास्तविकता भन्दा टाढा छ. यो अन्त मा काम गर्नेछ, तर कसलाई प्रतीक्षा गर्न को लागी मिल्यो. PR10 ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न अर्को साधारण तरिका भनेको एक ठूलो सामग्री सिर्जना गर्न र तपाईँको बजार आला भित्रको वेबसाइट मालिकहरू र ब्लगरहरू तपाइँसँग जोड्नको लागि एक अभियान चलाउनुहोस्।.
तथापि, यी लिङ्क निर्माण रणनीतिहरू वास्तविकतामा प्रभावकारी छैनन्. सबैभन्दा पहिला, प्रयोगकर्ताहरूले जानकारीको बारेमा जो तिनीहरूले कहिल्यै सुनेनन् प्रदान गर्ने शानदार सामाग्री सिर्जना गर्न सजिलो छैन. यसले धेरै समय लिन्छ र यस्तो गुणस्तरको टुक्रालाई टुक्रा बनाउन प्रयास गर्दछ. अर्को समस्या यो हो जब तपाईंको सामग्री योग्य छैन. यस अवस्थामा, तपाइँ मध्य वा कम गुणस्तर वेब स्रोतहरूमा गणना गर्न सक्नुहुनेछ. आउटरीचले ती परिस्थितिहरूमा काम गर्दैन. यसबाहेक, विचार प्रभावकारीहरूले लिङ्क निर्माणको अवसरका हरेक दिनका लागि धेरै अनुरोधहरू प्राप्त गर्छन्. प्रायजसो अवस्थामा, उनीहरूले तपाइँको सामग्री पढ्न बिना आफ्नो अनुरोध छोड्न मात्र.
सही समाधान र, जसरी नै, मेरो जिन्दगीको कर्तो, अरुलाई बिना अरुलाई बेवास्ता नगरी आफैं सबैले गर्नुपर्छ. आउनुहोस् हामी यो कसरी काम गर्दछ नजिकको नजिक छ.
आफ्नो आफ्नै ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यो पागल हुन सक्छ, तर तपाईले अन्य उच्च पीआर वेब स्रोतहरूमा आफ्नै ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।. उदाहरणका लागि, म Google, Reddit, Facebook, LinkedIn, YouTube, र अरू जस्ता PR-10 वेब स्रोतहरूमा इच्छुक छु. यी साइटहरूले तपाईंलाई आफ्नै उच्च गुणस्तर, सान्दर्भिक ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न र तपाईंको साइटको स्तर सुधार गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं केवल यी लोकप्रिय वेब प्लेटफार्महरूमा तपाईंको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्न. तपाईँले उचित, उच्च गुणस्तर, र यी साइटहरू मध्ये एक सम्बन्धित उपस्थिति सिर्जना गर्न आवश्यक छ र मात्र त्यहाँ तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू छोड्नुहोस्. तपाईंले राम्रो प्रोफाइल सिर्जना गर्न आवश्यक छ र यसलाई अधिकतम सान्दर्भिक जानकारी भरेर भर्नुहोस्. तपाईंको प्राथमिक कार्य त्यहाँ त्यहाँ धेरै लिङ्क उत्पन्न गरिएको छ जुन तपाइँको लिङ्कसँग सम्बन्धित छ. त्यसो गरेर, तपाईले तपाइँको लिङ्क शक्तिशाली र प्रासंगिक बनाउनुहुनेछ.
अर्को चरणमा, तपाइँ सबै वेब स्रोतहरू बीचको लिंक बनाउन आवश्यक छ जहाँ तपाईंको पृष्ठ उपस्थित छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले फेसबुकमा नयाँ पोष्ट प्रकाशित गर्नुभयो भने, तपाइँलाई तपाइँको लिङ्क गरिएकोइन, इन्स्टाग्राम, Pinterest, चहचहाना, र अन्य खाताहरूबाट लिंक गर्न अनिवार्य छ।. र उप उपाध्यक्ष, ताकि सबै पृष्ठहरूसँग पछाडिको लिंकहरू छन्. नतिजाको रूपमा, तपाईले कुनै पनि प्रतिशत खर्च नगरी तपाईंको प्रयासबाट ठूलो PR 10 ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ Source .